The Oromo of Eastern Africa: A Mazruiana perspective,WD.Saalim.S.Saalim – Idil News
The Oromo of Eastern Africa: A Mazruiana perspective,WD.Saalim.S.Saalim
Posted By: Idil News Staff August 13, 2018
Sayfu-diin Aadam oo ah qoraaga maqaalka hoose ayaa dood xiisa badan ka samaynaya habka Amxaaradu isugu dayeen qabsashada iyo gumaynta Qawmiyadda Oromada .
Qoraagu waxa uu doodiisa ku salaynayaa khudbad uu caalimka reer Kenya Cali Masruuci oo lagu tilmaamo 100 ka qof ee dunida ugu aqoonta badan u jeediyay jaaliyadda Oromada ee dalka Maraykanka taas oo uu kusoo bandhigay isku milanka dhaqan iyo diimeed ee dhexmaray Oromada iyo Amxaarada, kaas oo noqday hubka ugu wayn ee Amxaaradu ku qabsadeen Oromada.
Qoraagu waxa uu lafa gurayaa sida Amxaaradu isugu dayeen inay diin , dhaqan iyo awood ba u moora duugaan dadka Oromada ah .
Waxa uu xusayaa in Amxaarada ay adeegsadeen hab ka ah in Oromada la Amxaareeeyo oo laga dhigo kuwa aan dhaqan iyo diin ka duwanayn iyaga (homogenization ) iyo in Oromada awood lagu muquuniyo oo laga dhago masaakiin hoos joogta Amxaarada (hegemonization ).
Waxa uu qoraagu xusayaa saddex (3) hab ama farsamo oo waawayn oo ay adeegsadeen Amxaaradu si loo muquuniyo Oromada oo kala ah :
1- Amxaaraynta Oromada (amharisation ): habkaan waxaa loo maray laba qaab oo kala ah (a) in Oromada laga dhigo Kiristaan oo kaniisada Orthodox ku biiraan(b) in Oromada afka laga bedelo oo laga dhigo dad ku hadla luqadda Amxaariga. Waana arrin mira dhashay sida uu qabo qoraagu oo maanta waxaa la helayaa malaayiin Oromo Kiristaan noqotay iyo malaayiin kale oo luqadooda koowaad noqotay Amxaari.
2- Isguursiga (inter-marriage) tanoo keentay in rag badan oo muhiima oo Oromo ah noqdaan kuwa guursaday haween Amxaaro ah , tiiyoo noqotay hab lagu qabsado Oromada .
3- Gelinta Oromada shaqada dawladda (bureaucratisation) , habkaan oo keenay in Oromo badan laga dhigo shaqaale xafiisyada dawladda ka shaqeeya iyo askar ilaalisa nidaamka ay garwadeenka ka yihiin Amxaarada.
Haddaba , Abiye Axmed oo laftigiisa ah Oromi ka dhashay habka Amxaaraynta dadkiisa ee af iyo diin oo dhanka hooyada ku abtirsada Amxaarada , kana soo jeedo xaaskiisa ma noqon doonaa mid isku roga Amxaarada oo Qawmiyadda uu kasoo jeedo u abuura sharaf iyo awood ay ku hogaamiyaan dalka Itoobiya ?.
The Oromo people have not been able to dominate the politics of Ethiopia, as the Amhara and Tigrinya people have dominated the empire’s governance. Nonetheless, the Oromo’s ancestral principle of democracy–a transitional principle of eight years as a generational unit–has influenced many countries and could one time influence Ethiopia’s politics.